fun – စာမကျြနှာ7– Healthy Life Journal
ဆေးလေးတော့ ရောင်းဦးမှ . . .
လူနာကို စစ်ဆေးပြီးနောက် ဒေါက်တာက ဆေးညွှန်းပေးလေသည်။ ” ဒီအနီရောင်ဆေးကို မနက်အိပ်ရာထချိန်မှာ ရေခွက်ကြီးကြီးနဲ့ ရေအပြည့်ထည့်ပြီး သောက်ပါ . . ဒီအစိမ်းရောင်ဆေးကို နေ့လယ် ထမင်းစားပြီးချိန်မှာ ရေခွက်ကြီးကြီးနဲ့ ရေအပြည့်ထည့်ပြီး သောက်ပါ . . ဒီအပြာရောင်ဆေးကို ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်မှာ...
ဒေါက်တာတစ်ယောက်နဲ့ပြရန်အတွက် ဆေးခန်းတစ်ခုသို့ လူနာက ဖုန်းဖြင့် ကြိုတင်စာရင်းလှမ်းသွင်း လေသည်။ “ ကျွန်တော် ဆရာနဲ့ပြချင်လို့ ကြိုတင်စာရင်းပေးတာပါခင်ဗျာ” “ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်. . . ဆရာနဲ့ပြဖို့ စာရင်းပေးတဲ့သူများနေလို့ နောက်နှစ်ပတ်လောက်နေမှပဲပြလို့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ရှင်” “ ဗျာ. . ....